Mụbaa Okporo ụzọ - Atụmatụ 25 egosipụtara iji too
Tọzdee, Septemba 15, 2011 Sunday, December 4, 2011 Douglas Karr
Mụbaa okporo ụzọ… ọ bụ okwu m na-anụ ugboro ugboro. Ọ bụghị na ekweghị m na ịba ụba okporo ụzọ, ọ bụ na oge ụfọdụ ndị ahịa na-agbasi mbọ ike ịbawanye okporo ụzọ nke na ha na-echefu ịnwa ịbawanye njigide ma ọ bụ ntụgharị na okporo ụzọ ha nwere. Nke a bụ n'elu 25 pụtara azum na anyị na gbapụtagoro maka nke anyị web Njirimara na ndị ahịa anyị na-amụba okporo ụzọ… ma hụ na ha na-na-na-arụpụta na ya!
Tozọ ịbawanye okporo ụzọ:
Na-ebuli saịtị gị elu maka search engines. Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ ụzọ kachasị mfe iji nwekwuo okporo ụzọ… yana nke kachasị mma, ọ bụ okporo ụzọ dị mkpa nke na-achọ gị! Ghọta isiokwu ndị ị chọrọ iji na ndị ọrụ nyocha ahụ na-eji.
Iji ntị na-adọrọ adọrọ n’isiokwu. You mara na ndị mmadụ na-pịa 20% nke isi okwu ha na-agụ? (Agaghị m ruo mgbe m gụrụ Vince Robisch's post). Can nwere ike ịbawanye okporo ụzọ site na itinye uche na aha gị dịka ọdịnaya.
Jiri ihe mkpali nkọwa nke meta na ibe gi na blọgụ gị. Nkọwapụta Meta nwere ike ịbụ ọnụ iji nweta ọnụ ọgụgụ dị elu site na ọnụego na nsonaazụ njikwa nchọta, nke a abụrụla ụzọ aghụghọ iji mụbaa ahịa na ndị ahịa anyị.
Lelee nke gị mkpoputa na ụtọ asụsụ. Fọdụ ndị folks na-amazi okwu banyere edemede na ụtọ asụsụ, na-ahapụ saịtị ozugbo ha hụrụ mmejọ. M chọpụtara n’oge na-adịbeghị anya Chọọ mgbe mmadụ kọọrọ m njehie nsụpe ma m amaghị peeji.
Malite blog na kwa oge. Ka ị na-ede ihe, ohere ka enwere maka mmadụ ịchọ ọdịnaya gị. Ka ị na-agbanwe agbanwe, otu a ka ndị mmadụ ga-alaghachi iji chọta ọdịnaya ọhụrụ.
Etinye na imewe akụrụngwa. A ezi imewe ga-adọta, ọjọọ imewe ga-chụpụ ahịa. Enwere ọtụtụ saịtị dị ukwuu ebe ahụ nwere ọdịnaya dị egwu nke na-anaghị adọta uche n'ihi na ha dị njọ. Nnukwu atụmatụ agaghị efu gị ọtụtụ puku… enwere ọtụtụ saịtị isiokwu nwere oke ịtụnanya na ihe ịchọ mma maka ihe na-erughị $ 20!
Tinye njirimara gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị na saịtị gị. Ndị mmadụ achọghị ịgụ ahịa ahịa ahịa, ha chọrọ ka ọ dị ha ka ha na-agụ ozi sitere n'aka onye dị adị. Ọtụtụ mmadụ ga-enwe mmasị na saịtị ma ọ bụ blọọgụ gị ma ọtụtụ ndị mmadụ ga-alaghachi na blọọgụ gị mgbe ha matara na ha anaghị eso onye edemede ọdịnaya na-amaghị aha. Aga m akwado iji ya Nkọwapụta Google na akara mkpado itinye foto na nsonaazụ ọchụchọ gị, kwa!
Tinye nke gi adreesị ahụ na nọmba ekwentị gaa na saịtị gị. Ọzọkwa, a na-ewere onye na-ezochi njirimara ha dị ka onye a na-apụghị ịtụkwasị obi. Mee ka ndị mmadụ mara ka esi achọta gị… ọ ga-eju gị anya na nleta ị na-enweta mgbe ha mere! Ọzọkwa, ịtinye adreesị anụ ahụ na saịtị gị nwere ike imeziwanye ohere ịchọrọ ịchọta na nsonaazụ ọchụchọ mpaghara.
Tinye aka na a okirikiri nhọrọ ukwuu na saịtị gị ma ọ bụ blog. Smartphones agbawaala na ewu ewu. Mgbe ndị ọrụ ama ama hụrụ na ị mebere saịtị gị maka ngwaọrụ ha, ha ga-alaghachi. Dịkwuo mobile okporo ụzọ na mkpokọta okporo ụzọ ga-abawanye dị ka nke ọma!
Na-akwalite ọnụnọ mgbasa ozi gị. Mgbe mmadụ masịrị gị ma ọ bụ soro gị, ị gbakwunyela onye ga-eleta gị na netwọkụ gị. Zụlite netwọkụ gị ma ị ga - eto eto nke okporo ụzọ site na netwọkụ mmekọrịta gị. Kpee netwọk gị ka gị na gị jikọọ ka ị nwee ike imelite ha site n'oge ruo n'oge site na ọdịnaya gị dị mkpa.
Tinye akwụkwọ akụkọ! Ọtụtụ ndị ọbịa agaghị ahụ ihe ha chọrọ… mana ọ bụrụ na saịtị ma ọ bụ blọgụ ahụ dị mkpa, ha ga-eso gị na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ọbụlagodi ịdebanye aha na akwụkwọ akụkọ gị. Mgbe ị jikọtara na saịtị gị, akwụkwọ akụkọ gị ga-abawanye okporo ụzọ ozugbo. Email Marketing nwere ihe ịrịba nloghachi na ego… na ọbụna mma nloghachi na okporo ụzọ!
Tinye njikọ na ntinye aka gị ma gbakwunye ha na email ọ bụla na-apụ. Maghị ihe ị na-aga ịdọrọ uche mmadụ… yana doro anya, ị nweela mmekọrịta gị na onye ị na-ezigara ozi.
Iji irè menu menu. Ighagharị dị irè na-eme ka saịtị gị dị mfe iji wee mee ka okporo ụzọ na-alaghachi. Pụrụ iche a pụrụ isi chọta nke igodo ọcha ga-ekwe ka search maqbx chekwebe mara ihe isi ihe na saịtị gị.
Nye mmekọrịta ngwaọrụ dị ka ihe mgbako, nyocha, na ihe ngosi. Ndị mmadụ anaghị agụ ihe dịka ị chere… ọtụtụ na-achọ ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị iji nweta ozi ha chọrọ. Nnukwu ihe mgbako na saịtị ga-eme ka ndị mmadụ na-alaghachi ugboro ugboro.
Jiri onyonyo, eserese na ihe omuma. Ihe osise na eserese abụghị naanị na-enyere ndị mmadụ aka ịghọta ma cheta ozi ahụ, atụmatụ dị ka infographics na-eme ka ọ dị mfe ịkekọrịta ozi ahụ ma nyefee ya. Nakwa, ọtụtụ saịtị mmekọrịta na-etinye ihe ngosi onyonyo dịka na Facebook.
Na-akwalite ndị isi ụlọ ọrụ ndị ọzọ na blọọgụ ha. Kpọ ndị ọgbọ gị aha bụ nnukwu ụzọ iji dọta uche ha. Ọ bụrụ na ọdịnaya gị tozuru oke, ha ga-ekenye ya ndị na-ege ha ntị. Ọtụtụ n'ime ndị isi ahụ nwere nnukwu ndị na-ege ntị. Ọtụtụ mgbe, mgbe onye ọrụ ibe m kpọtụrụ m, a na-amanye m ịza ajụjụ na saịtị ha ma soro ndị na-ege m ntị kerịta njikọ ahụ. Ọ bụrụ na ọdịnaya dị ịtụnanya, enwere m ike ịkekọrịta otu post gbasara ya. Nke ahụ ga-ewebata njikọ site na saịtị m na nke ha, ụtụ ọhụrụ maka okporo ụzọ gafere.
Tinye bọtịnụ mmekọrịta na elekọta mmadụ ntinye akwụkwọ ngwaọrụ dị ka Twitter, Facebook, LinkedIn, Google na StumbleUpon iji kwado okwu onu. Nke a na-enye ndị na-ege gị ntị ohere ịkwalite gị… n'efu .. na ndị na-ege ha ntị! Ọ na - apụtakarị ihe ma ọ bụrụ na mmadụ nọ na netwọkụ gị atụ aro ọdịnaya. Ilekwasị anya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya emeela ka ọnụọgụ buru ibu nke okporo ụzọ saịtị anyị hụtụrụla.
Lezienụ maka nkwalite. Ọ bụrụ n’itinye mgbalị n’ime ọkwa dị egwu, gịnị kpatara na ị gaghị akwụ ụgwọ iji kwalite ya? Ọ bụrụ na ị nwere njikọ mmekọrịta na saịtị gị dịka anyị na-eme, ụfọdụ ndị ọbịa ga-eme ihere mgbe ha hụrụ 1 na 0 na bọtịnụ mmekọrịta gị. E nwere nnukwu netwọkụ dị n’ebe ndị mmadụ na-agagharị, dịka na + 1 ọdịnaya gị maka obere ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Spruce ochie ọdịnaya. Naanị n’ihi na ọdịnaya gị emeela ochie, ọ pụtaghị na oge agwụla. Zere iji ụbọchị na-ewu ụlọ na ide ihe na isiokwu - ịchọrọ ijide n'aka na ndị na-ege gị ntị na-eche na ị na-arụ ọrụ na ọdịnaya gị ka bara uru. Otu ugboro n'ọnwa, lelee ọdịnaya ejiri ogo dị ka nke ọma Semrush ma weghachite aha peeji, ọdịnaya na meta data maka isiokwu ndị ọ na - agbago.
Jiri nnukwu ụgbọala were ụgbọala n'asọmpi, nkwalite na ụgwọ ọrụ dị ka PunchTab. Usoro ndị a anaghị emepụta ndị ọbịa kachasị mkpa, mana n'ihi na ha na-eme mkpọtụ na nkwalite, ị ga-ejigide ụfọdụ okporo ụzọ ọhụrụ.
Eledala ihe ndị ahụ anya ike nke mgbasa ozi ọdịnala, karịsịa ma ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ na mpaghara teknụzụ. Nkwupụta banyere ụlọ ọrụ na akwụkwọ akụkọ, ngosipụta azụmaahịa, azụmaahịa azụmaahịa, kaadị azụmaahịa, ọbụlagodi akwụkwọ ọnụahịa people na-enye ndị mmadụ URL na websaịtị nke ụlọ ọrụ gị, blọọgụ na saịtị mmekọrịta ga-abawanye okporo ụzọ. Mmekọrịta ọhaneze ndị mmadụ nwere mmekọrịta na ụlọ ọrụ na ha nwere oge na talent ịkọ akụkọ gị… ị nweghị. Fọdụ n'ime ahịa anyị kachasị mma sitere na ndị odeakụkọ ọdịnala na nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị dere banyere anyị ma ọ bụ gbaa anyị ajụjụ ọnụ.
Kesaa ọdịnaya gị n'ime ụlọ ọrụ dị iche iche on LinkedIn na forums. Fọdụ ndị mmadụ na-enyocha ụdị egwuregwu ụfọdụ, mana ndị ọzọ na-arụsi ọrụ ike - ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ahụ na ị na-enyere aka ma mara ihe gị, ha ga-emecha laghachi na saịtị gị. Ha nwekwara ike ịchọta mkparịta ụka gị site na nyocha.
Dị ka otu ụlọ ọrụ dị iche iche si enyere aka ịbawanye okporo ụzọ, otu a ka ọ dịkwa ịza ajụjụ ndị dị mkpa Ajuju na Azịza saịtị. Offọdụ n'ime ha na-enye gị ohere ịkọwa njikọ dị na nzaghachi gị. Saịtị Q&A nọ na-ewu ewu na ewu ewu mana ọ dị ka nwayọ nwayọ. Agbanyeghị, nke ahụ bụ ebe ndị folks na-achọ azịza - ma ọ bụrụ na ịnwee njikọ gị na ọdịnaya gị n'oké ajụjụ, ha ga-eweghachi ya na saịtị gị.
Nyocha na nlekota oru maka isiokwu ndị a kpọtụrụ aha na mkparịta ụka nke saịtị ma ọ bụ blog gị nwere ike inyere aka. Have nwere ọkwa enyere maka aha ndị asọmpi, aha ngwaahịa, isi okwu ụlọ ọrụ? Tụle ihe ndị a mgbe nile ga-ekpughe gị nye ndị na-ege gị ntị buru ibu nke ndị nwere ike ịbịa. Ọ ga - arụkwa netwọkụ na ikike nke gị mgbe ị na - enye ozi bara uru.
Njikọ-baiting ka bu uzo di irighiri uzo esi bawanye ahia. Dabere na Ndepụta Ngini Nchọta, Typesdị isiokwu 5 yiri ka ha na-emepụta ọtụtụ backlinks na ọtụtụ ọrụ nje. Ha bụ Akụkọ, Ngabiga, Mwakpo, Akụrụngwa na ọchị. Nke a blog post, dị ka ihe atụ, bụ ihe enyemaka post.
Tags: dịkwuo okporo ụzọ
Atụmatụ ndabere WordPress… Nwere Otu?
Disemba 3, 2011 na 9:19 mgbede
Ekwenyere m. Enweghị m ike iguzo “ndị odee ọdịnaya na-amaghị aha”. ^-^
Sep 24, 2013 na 2: 16 AM
Ndepụta mara mma. Iji gbakwunye, ana m eji onyonyo mara mma na ibe m wee kesaa ha na Pinterest, Facebook, Instagram na njikọ na webụsaịtị m. Ịmepụta ụdị ngosi nke ọdịnaya m na ikesa ha na SlideShare.net, Scribd na saịtị nkesa faịlụ ndị ọzọ na-enyekwara aka itolite ndị na-ege m ntị na okporo ụzọ.